- Présidence: 132 840 069 000 Ariary (664 milliadrs fmg), be loatra io, tsinjaraina amin'ny fokontany 20 000 ny ankamaroan'io vola io;
- Sénat: 25 153 000 000 Ariary, foanana ity Andrimpanjakana ity;
- Député: 50 553 000 000 Ariary, député 60 sisa no ilaina, fa any amin'ny Faritra no manapaka ny lalàna itondrana ny Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo. Efa vaky sasaka izany io budget io;
- Primature: 146 296 067 000 Ariary (731 milliard fmg), foanana ny Praiminisitra, tsinjaraina amin'ny Kaominina io vola io. Misy Kaominina 1600, samy mahazo 91 435 041 ariary (457 175 209 fmg)
- Filan-kevitra fampihavanana, 7 123 000 000 Ariary, foanana io rafitra io, izay nanao ratsy teto amin'ny Firenena dia terena amerim-bola ary mikisaka tsy mahazo mitondra sy mitsabaka amin'ny raharaham-panjakana rehefa avy mifona mazava amin'ny heloka vitany, tsy maninona tsy gadraina izy, izay ny fampihavanana ambony azo omena azy;
- CENI: 52 064 269 000 Ariary, foanana daholo ireny rafitra annexe rehetra ireny fa miverina amin'ny ati-tany no mikarakara izany, izay mpiasam-panjakana tratra mangala-bato dia higadra mandram-pahafatiny sazy an-terivozina. Tsy hoe rehefa mitanila ny administration dia jerem-potsiny ka mamorona structure appendice hafa, ny eo no diovina, toy izany koa ny ONE, environnement, averina amin'ny ministère misahana an'izany fa tsy misy rafitra mitaingim-bozona fotsiny eo.
- Misy 31 ireo ministera ankehitriny
2 146 527 739 ariary ny tambin-karama ho an'ireo rehetra ireo
4 047 023 795 ariary kosa ny fampandehanan-draharaha (fonctionnement, jiro, rano, carburant, fourniture de bureau, déplacement...)
Mitotaly 6 193 551 534 (31 milliards fmg) izany ny vola lany amin'ireo ministera 31 ireo ho fampandehanan-draharaha.
Ho ferana 15 ihany ny isan'ny ministera, vaky sasaka izany ny vola laniana amin'io, maro koa ny mpiasam-panjakana no alefa any amin'ny Fokontany sy Kaominina, izay izy ireo no miantoka azy, satria efa natao ny transfert budgétaire, dia izy no miantoka ny mpiasany, ataony fantôme ny azy dia anjarany izay, ny fanjakana foibe tsy mitantana intsony fa lasa mpanara-maso sy mitari-dalana ary mampiofana, mitady lalam-barotra sy teknolojia.
Raha tsotsorina izany, dia amin'izao budget efa misy izao, izay tsiahivina ihany fa 15% ihany ny hetra miditra amin'io teti-bola io, dia efa mahazo vola azo alefa amin'ny Fokontany sy Kaominina isika.
Présidence: Omena fokontany 100 milliards ariary
Sénat: Foanana, 25 milliards ariary
Député: 1/2 budget, 25 milliards ariary
Primature: Foanana, 146 milliards ariary
FFM: Foanana, 7 milliards ariary
Ministere: 1/2 ny salaire sy fonctionnement, 3 milliards ariary
Totalin'ireo fotsiny 306 milliards ariary (1 530 milliards fmg)
Io dia azo iaingana zaraina amin'ny 20 000 fokontany sy 1600 kaominina. Ho fampandehanan-draharaha.
2- Ny kajy faharoa, dia ampiasa carte électronique isika ho solon'ny vola taratasy, na Mvola, na Orangemoney, na airtelmoney, na carte bleue.
Io karatra io dia hisy credit vary 150kg isan-tokatrano isam-bolana ho azony hiditra ao, vary ihany no azo alaina amin'izay credit vary izay, azo hifanakalozana, azo omena olona toy ireny crédit téléphone de toi et moi ireny, tsy misy sarany. Vary vokatra eto an-toerana ihany no azo avy amin'io.
Ny TVA dia any ampotony no alaina, fa tsy misy TVA ny entana vidiana andavan'andro amin'io carte io, ny TVA izany avy dia alaina mivantana amin'ilay carte professionnel isaky ny misy transaction, tsy misy hetra aloha any amin'ny birao izany intsony ka hiteraka kolikoly.
Ny hetra sy ladoany rehetra momba ny PPN, fitaovam-pianarana sy ny fitaovana ary akora entina mamokatra dia foanana avokoa.
Tonga dia midina avy hatrany 20% TVA, 20 % douane, izany hoe 40% avy hatrany ny fidinan'ny vidin'entana andavan'andro. Hiakatra 40% avy hatrany izany ny fahefa-mividin'ny isan-tokatrano, miampy ny vary 150Kg izay ho azony ao anaty carte de payement.
Fehiny, raha 15% ny hetra tafiditra sy voahangona izao dia samy andoa hetra avokoa izany ny Malagasy rehetra tsy misy ankanavaka, satria vao mampiasa ilay karatra ara-vola izy dia hiala avy hatrany ny hetram-panjakana, ary hivantana any amin'ny Kaominina misy ilay toerana nampiasany ilay karatra ny anjaran'ny Kaominina, ary hivantana any amin'ny kaontin'ilay Fokontany ihany koa ny azy.
Fonkontany mahazo 50% amin'ny hetra, Kaominina 25%, Faritra 10%, Fitondrana foibe 15%.
Izany hoe amin'ny tetibola ankehitriny 5 022 142 000 000 Ariary
Dia ho tsinjaraina amin'ny Fokontany ny 50% = 2 500 millards ariary, ny fokontany 20 000 izany samy mahazo 125 millions ariary isan-taona (625 millions fmg/Fokontany), tafiditra amin'io ny karaman'ny mpiasa, izay misy 25 licenciés isam-pokontany, ny fanaovana foto-drafitrasa, ny fampandehanana ny sekoly, dispensaire CSB1-2, ny fiantohana ny fandriam-pahalemana any an-toerana.
Ny Kaominina 25%, 1 250 miliards tsinjaraina ny 1600 kaominina, samy mahazo 78 millions ariary (390 millions fmg/Kaominina)
Ny Faritra 10%, 500 milliards ariary mizara 3, samy mahazo 167 milliards ariary (833 milliards Fmg)
Ny Fitondrana Foibe mahazo 15% 753 milliards ariary, (3 767 milliards fmg)
Ireo tsy manana asa rehetra, dia tsy maintsy miditra service national avokoa, akisava karatra an-dalana io, ny latsaky ny 16 taona, tsy maintsy mianatra avokoa, na formation professionnelle na générale, izay ny Faritra no manapaka ny programam-pampianarana mifanaraka amin'y filan'ny Faritra tsirairay.
Samy mitantana ny hareny ny Faritra telo, avaratra, afovoany, atsimo, na volamena io, na vy, na harena ambanin'ny tany, vatosoa, bois de rose, ny harena an-dranomasina, satria samy manana ranomasina any andrefana sy any atsinana ny faritra telo.
Fampiraisana ny firenena io satria tsy hizara 22 régions sy 6 provinces intsony, fa dia fizarana 3 lehibe sisa.
Ambaratongam-pahefana telo ihany. Ny Faritra, ny Kaominina ary ny Fokontany.
Any amin'ny Fokontany sy ny Fokonolona avokoa no hiainga ny fampandrosoana rehetra. Na Kara-panondro, na ny état civil, na passeport, na ny fananganana orin'asa, ny fitrandrahana ny harena an-dranomasina na ankibon'ny tany dia eo anivon'ny Fokontany avokoa no vavahady hidirana amin'izany, guichet unique.
Hisy ny fampiofanana avy amin'ny Fitondrana Foibe, ny fanaraha-maso ary ny fanampiana amin'ny fitantanana mba tsy vola very fotsiny ihany koa izany.
Sary, ny ilany havia dia maneho ny fivangongoan'ny mponina, ny mavo tsy misy olona firy, ny marron misy maromaro, ny mena mifanitsa-kitro.
Ny sary ilany havanana kosa dia maneho ny autoroute izay atao manodidina an'i Madagasikara, ary miaraka amin'ny Lalamby ny ilany atsinanana miloko maitso, ny antony dia mivangongo amin'ny ilany atsinanana avokoa ny Malagasy ka mila fifamoivoizana lehibe izany na ny vokatra na ny olona amin'iny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny, izay hanaraka ny Canal des Pangalane, izay averina ka anomboka avy any Antsiranana ary hiafara any Faux Cap atsimon'ny Nosy manaraka ny sisin'ny Lalamby sy autoroute ilany atsinanan'ny Nosy.